चाडबाडमा रक्सी पिउँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् डाक्टरका १२ टिप्स – ToplineKhabar
October 11, 2016 नरेस तिवारी0Comment
डा. चन्द्रमणि बस्याल,आयुष अस्पताल, नयाँबानेश्वर काठमाडौँ
सात्विक, राजसी र तामसी गरी खानालाइ तीनप्रकारमा विभाजन गरिएको छ । सात्विक भोजन भनेको सादा खाना हो, जुन परापूर्वकालमा योगी, ऋषिमुनिले प्रयोग गर्ने गर्थे । अहिले पनि यो प्रयोगमा छ । राजसी भोजन भनेको राजामहाराजाले प्रयोग गर्ने भोजन हो । त्यस्ता खानामा विभिन्न परिकार पर्छन् । त्यस्तै तामसी भोजन भनेको हाम्रो शरीरलाई हानि गर्ने भोजन हो । विभिन्न प्रकारका मदिरा, चुरोट, खैनी, गुट्खा, पान, पुकार, खैनी आदिजस्ता खानेकुरा नै तामसी खानेकुरा हुन् । यसले हाम्रो शरीरलाई हानि मात्र गर्छ । कुनै फाइदा हुँदैन । तैपनि मानिसले नशाका रुपमा क्षणिक रमाइलोका लागि यस्ता खाना खाने गर्छन् ।
– सिधै रक्सी खानुस् भनेर कसैले पनि सुझाव दिन सक्दैन । तर, यदि तपाईं वर्षौदेखि रक्सी खाइरहनुभएको छ भने बिस्तारै र धेरै कुरा सोचविचार गरेरमात्र खानुस् ।
– एकैपटकमा रक्सी छाड्न सकिँदैन । यसले अर्को साइड इफेक्ट निम्त्याउँछ । एउटा लामो प्रोसेसमा मात्र रक्सी छाड्ने विचार गर्नुस् ।
– जति सक्यो कम खानुस् । ठिकै छ चाडबाड, जमघटमा खाउँ र बिस्तारै छाड्दै जान्छु भनेर आफैँसँग एउटा प्रतिबद्धता गर्नुस् ।
– रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हरेक व्यक्तिमा फरक–फरक हुन्छ । रक्सी छाड्नका लागि सबैमा एउटै तरिकाले फिट गर्दैन । त्यसैले डाक्टरको सल्लाह र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेरमात्र रक्सी छाड्ने उपाय अपनाउनुस् ।
– तामसी खाना कममात्र खाने र बाँकी सात्विक खानाले पेट भर्ने बानी विकास गर्नुस् ।
– रक्सीमा टक्सिन भन्ने एकप्रकारको पदार्थ मिलाइएको हुन्छ । यो पदार्थ मानव शरीरको कोष र सेलमा गएर बसेको हुन्छ । यसले एकैपटक असर गर्दैन, बिस्तारै मानिसका सेल र कोषमा रहेका रोग प्रतिरोधात्मक गुणलाई असर गर्दै जान्छ । रक्सीले तत्कालै केही असर गरेकोजस्तो देखिँदैन तर बिस्तारै मन्द विषजस्तै गरेर यसले शरीरमा असर गरिरहेको हुन्छ ।
– कसैलाई एक प्याक खाँदा पनि लाग्छ, कसैलाइ चार बोतल खाँदा पनि लाग्दैन । त्यसैले आफ्नो शक्ति आफैँ जज गरेर, यतिसम्म मेरो शरीरले धान्न सक्छ भनेरमात्र रक्सी पिउँदा राम्रो हुन्छ ।
– युरिक एसिडको प्रमुख दुस्मन रक्सीजन्य पदार्थ हो । ८.५ युरिक एसिड भएका व्यक्तिले रक्सी प्रयोग गरेमा दुई दिनमै १० पुग्न सक्छ र किड्नीलाई असर गर्न सक्छ । मुटुमा पनि असर पुर्याउँछ । सुगर हुनेले रक्सी प्रयोग गर्नुहुँदैन । सबैभन्दा बढी रक्सीले लिभरलाई असर पुर्याउँछ ।
– खुट्टा लुलो हुन थालेदेखि, जिउ थर्थराउन थालेपछि रक्सी पिउन छाड्नुहोस् । रक्सीको ह्याङ किल गर्न कागतीपानी खान सक्नुहुन्छ ।
– मासु र अल्कोहल बढी प्रयोगले कुनै पनि रोग लाग्न सक्छ । परिवारका सदस्य र साथीभाइसँगको जमघटमा रक्सी र मासु खाने परम्परामाथि एकपटक पुनर्विचार गर्ने गर्नुहोस् ।
– रक्सी, मासुदेखि लिएर कुनै पनि खाना एकदमै बढी खायो भने डाइरिया, कब्जियतदेखि लिएर किड्नी, मुटुजस्ता ठूला रोगसम्म लाग्न सक्छ । ब्रेन स्लो हुन सक्छ । त्यसैले शरीरलाई ठिक्क र आवश्यक खाना मात्र खाने बानी गर्नुहोस् ।
– पानी पिउने बानी विकास गर्नुहोस् । हाम्रो शरीरमा जति धेरै पानी पिउन सक्यो उति नै बढी स्वस्थ भइन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस् । रातोपपाटीबाट
← काठमाडौंका सडक प्रायः सुनसान
आज विजयादशमी मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरुप टीका, जमरा थापी मनाइँदै →
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई बर्खास्त